Kuthetha ntoni ukuphupha into ekuyo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kuqhelekile kubantu abaninzi: ukuphupha ubunini akubangeli ukuba ube nemvakalelo elungileyo xa uvuka. Kwangelo xesha, intsingiselo inecala layo elifanelekileyo kwaye izisa isilumkiso ekufuneka silandelwe. Imalunga nenyani yokuba iimvakalelo ezahlukeneyo kunye neentshukumo ezichaphazela ubomi kwaye zinokuthatha imeko.
Umzekelo: Xa ukwindawo enabantu abaninzi abanovalo, kunokwenzeka ukuba ube novalo ngakumbi.
Ekuqaleni, ukukhumbula iinkcukacha kunye nokuziqhelanisa neemeko eziqhelekileyo ngamanyathelo amabini okutolika amaphupha. Ngale ndlela, lelona xesha lifanelekileyo ukuqala ukufumana lonke ulwazi malunga nomxholo.
1 Iphupha lokuba nelifa, lithetha ntoni?
2 Iphupha lokuba nelifa elibi
3 Iphupha lomntu onedemon
4 Ukuphupha uthatha umntu
5 Ukuphupha uphethwe ...
6 Intsingiselo yokuphupha unedemon
7 bephupha malunga nelifa losapho
8 Ukuphupha ukuba omnye umntu ungenwe
9 Ukuphupha uneedemon ezahlukeneyo
10 Intsingiselo yokuphupha malunga nokuba nomoya
11 Ngaba iphupha elihle okanye elibi nje?
Iphupha lokuba nelifa, lithetha ntoni?
Okokuqala, ukuba nepropathi kunokuba neembono ezimbini ezahlukeneyo: ekaomoya neyeedemon. Inkqubo ihlala ifana: amandla athile oburhalarhume arhoxa kwizenzo eziqhelekileyo zaloo mntu kwaye aqale ukwenza ngendlela engaqhelekanga.
Ukuphupha ngelifa kuthetha ukuba iimvakalelo, ukungcangcazela kunye namandla kuyathatha. Ukongeza, kubalulekile ukucinga ngokuzolileyo kwaye uqonde ukuba ngawaphi amaxesha apho uziva unento ethile.
Isicatshulwa sizama ukubonisa ezona ntsingiselo zixhaphakileyo kule meko kunye neendlela zokucinga ezinokuthathwa. Ke ilula kwaye kuya kufuneka ulumke, kuba iphupha alinakubonwa kuphela njengento embi.
Iphupha lokuba nelifa elibi
Abantu bakungqongile kwaye isenokungabi yeyona ilungileyo, isenza iimvakalelo zibe mbi. Kunzima ukucela umgama, kodwa zama ukuba ungasondeli kakhulu komnye nomnye kwaye oko kukulungele. Kuqhelekile ukuba kubekho ukutshintshiselana ngamandla kwaye kunokuba kubi kuwe kuba kuhlala kukushiya ulele. Ke ukuba uziva ngathi umntu akanawo amazwi amnandi, zama ukunciphisa unxibelelwano naloo nto okwexeshana.
Iphupha lomntu onedemon
Iphupha lineentsingiselo ezimbini: ukuba uyabazi obu buntu, luphawu lokuba bafuna ukuthetha nawe, kodwa ukuba awumkhumbuli umntu lowo, luphawu lokuba esinye isihlobo siyakukukhangela kwaye sikucele malunga into ethile.
Ukuphupha ubunini, kule meko, kubonisa isidingo sokwenza ngakumbi umthetho wesisa ngaphandle kokujonga umntu.
Ukuphupha uthatha umntu
Amandla aphuma emoyeni wakho alunge kakhulu kwaye anamandla okuzolisa wonke umntu, nkqu nomntu okhaliphile ngakumbi. Ngendlela efanayo, luphawu oluqinisekileyo kwaye lumele ukuba abanye abantu bayathanda ukuba kufutshane nawe.
Ukuphupha uphethwe ...
Yintsingiselo yeklasikhi: amandla abanye anempembelelo ebomini bakho kwaye lixesha lokuba uyeke. Kwangokunjalo, akukho mfuneko yokuba nesimo sengqondo esingafanelekanga kwaye ekugqibeleni ube krwada, eyona nto ilungileyo kukuhlala uzolile. Ukuba kukho imfuneko, buyela umva kancinci kwaye uzolile ngakumbi, uphephe ukunxibelelana naloo mntu.
Intsingiselo yokuphupha unedemon
UMtyholi imele amandla Oyena mntu unamandla okona kwaye ubonakalisa ukuba kukho umntu okhohlakeleyo okujikelezileyo. Zolile, kuba umngcipheko wobomi awukho kwaye ngumntu omnye kuphela oza kwenza intlebendwane eninzi.
Ingcebiso kukufuna umgama kwaye ungazondli ezi "ndaba zincinci", kuba namhlanje ingomnye umntu kwaye ngomso isenokuba ngawe.
bephupha malunga nelifa losapho
Into efanayo eyenzekayo kuwe iyenzeka nakwizihlobo zakho: iimvakalelo zangaphandle zichaphazeleka. Kukho iindlela ezimbini kwaye owokuqala ukubalumkisa, ubenze baqonde lo mbandela. Enye indlela, ngamafutshane, kukuthandazela ukuba uThixo abe nako ukuphelisa ezi mvakalelo.
Nangona kunjalo, ukhetho luhlala lungolakho kwaye ingcebiso kukucinga malunga nokuba amalungu osapho aya kuba nentloko yokukuqonda oku.
Ukuphupha ukuba omnye umntu ungenwe
Ukuphupha ngobunini kuneentsingiselo ezimbini ezahlukeneyo kwaye kubalulekile ukuzazi ngcono nganye nganye. Ukuba uyamkhumbula umntu wamaphupha akho, luphawu lokuba uhamba kwisigaba esinzima kwaye ufuna "igama elinobuhlobo." Kwelinye icala, ukuba akwenzi njalo, luphawu lokuba umhlobo okude uya kukhangela ukuba uqhagamshelane nawe kwakhona.
Ukuphupha uneedemon ezahlukeneyo
Kubaluleke kakhulu ukufumana into ekunciphisayo, kuba iimvakalelo zangaphandle ziyakuchaphazela kwaye zisenokungabi ntle. Zama ukufunda iBhayibhile okanye incwadi enesigidimi esikhuthazayo.
Intsingiselo yokuphupha malunga nokuba nomoya
Ewe, imiqondiso ilungile kwaye ibonisa ukuba amandla ayo, ukuxhathisa amandla amabi, makhulu kakhulu.
Ngaba iphupha elihle okanye elibi nje?
Bonke abantu bayachaphazeleka kwisenzo sendalo abahlala kuyo kwaye kufuneka bafunde ukuyithintela le nyaniso ixhaphakileyo.
Ukuphupha ubunini sisilumkiso sokuba ulumke ngakumbi kwaye ufunde ukuzixhobisa ngokuchasene nezi mvakalelo.